Uzodinma: Mkpebi Ụlọikpe Kachasị enweghị ebe ọ gbadoro ụkwụ - PDP - BBC News Ìgbò
Uzodinma: Mkpebi Ụlọikpe Kachasị enweghị ebe ọ gbadoro ụkwụ - PDP
16 Jenụwarị 2020
Uzodinma: Tanko rituo dịka ọkaikpe Naijiria - PDP
Otu pati PDP akpọọla oku ka ỌkaikpeTanko Mohammed rịtuo n'ọkwa dịka ọkaikpe Ukwu Naijiria nakwa onyeisioche otu na-ahazi ikpe bụ 'National Judicial Council'.
PDP kpọrọ oku a ka ha nwechara ọgbakọ imeobi n'ụbọchị Tọzde n'ihi mkpebi Ụlọikpe kachasị nke napụrụ Emeka Ihedioha nke PDP ọkwa Gọvanọ Imo steeti ma nyefee Hope Uzodịnma nke APC.
N'ozi nke Onyeisioche pati ahụ bụ Uche Secondus ziri ndị ntaakụkọ, o sịrị na "Ụlọikpe kachasị nke Tanko bụ onyeisis ya enwezighị ntụkwasịobi, kama ha na-emezi mbunuche gọọmenti APC."
Ha gara n'ihu sị na, "Mkpebi Ụlọikpe kachasị nke kposara mmerị Emeka Ihedioha (onye nwetara vootu 276,404) ma jiri vootu amaghị ebe o si kpọpụta Hope Uzodimma nke APC, onye nwetara vootu dị 96, 458 dịka gọvanọ Imo steeti bụ ihe jọgburu udele sigbuo nkapị, ma bụrụkwa ụzọ nwere ike ibute nsogbu. O kwesịrị ka e kpegharịa ya."
Ihe ndị i kwesịrị ịma maka Kingsley Obiora, nwa afọ Igbo Buhari họpụtara dịka osote onyeisi CBN
Image copyright Sunday Aghaeze/Facebook
Nkenke aha onyonyo Kingsley Obiora na Godwin Emefiele
Onyeisiala Muhammad Buhari ahọpụtala Kingsley Obiora maka ọkwa osote onyeisi ụlọakụ etiiti bụ CBN.
Ọnụ na-ekwuru Buhari bụ Femi Adesina onye gbara ama a kwuru n'ozi o zigara ụlọọrụ ntaakụkọ na "Onyeisiala Buhari wegara aha Kingsley Isitua Obiora ụlọomeiwu Ukwu maka nkwado maka ọkwa osote onyeisi ụlọakụ etiti."
A na-atụ anya na Obiora, onye welitere isi n'ụlọakụ mba ụwa bụ IMF ga-anọchi Joseph Nnanna, onye ga-ala ezumike nka n'abalị abụọ nke ọnwa Febụwarị afọ 2020.
Obiora, onye a na-agba ama na ụbụrụ ya na-achọ ọkụ dịka o jiri 'First Class pụta na mahadum gụrụ 'Economics na mahadum 'University of Benin' nakwa Mahadum 'University of Ibadan.'
Nwoke gbara afọ iri nanọ na-atọ na- arụ n'ụlọakụ mba.
Aka m adịghị na mwepu Ihedioha - Osinbajo
Osote onyeisiala Yemi Osinbajo agọrọla aka ya na ụkwụ ya n'asịrị na-efegharị nke na-ekwu na aka ya dị na mwepu ụlọikpe Supreme Court wepuru Emeka Ihedioha dịka gọvanọ Imo Steeti.
Laolu Akande ọnụ na-ekwuru Osinbajo, kọwara na akụkọ ahụ bụ fa fa fa - Fawul... maka na otu mkpụrụ eziokwu adịghị na ya.
Rochas Okorocha sị na ya adịghị atụ ụjọ nnyocha Hope Uzodinma
Image copyright Facebook/Rochas Rochas
Onye chiburu Imo steeti bụ Rochas Okorocha ekwuola na ya adịghị akụja maka atụmatu nyocha ọbaego Imo steeti aka na-achi Imo bụ Hope Uzodinma kwuputara ụnyaahụ.
Gọvanọ Uzodinma kwuru maka nyocha ọbaego a ka ọ na-anabata iyi ọrụ e duru ya na-steeti ahụ, ebe ọ nọ kwuo na ọ na-enye onye nchịkọta akụnaụba steeti ahụ iwu ka o zitere ya ihe gbasara ọnọdụ mkpata na mmefu ego steeti ahụ site n'afọ 2010 ruo ugbua, n'ime ụbọchị anọ.
Hope Uzodinma aṅụọla iyi ọrụ
Ihe ndị mere Igbo ejighị Odumegwu Ojukwu, enyi Biafra egwu egwu
Amụma Mbaka emezuela, Hope Uzodinma emeriela dịka Gọvanọ Imo steeti
Sinetọ Okorocha dere n'akara Twitter ya na ihe ya ekweghị na ya bụ iji atụmatu nyocha na-amaja ya, ezinaụlọ ya nakwa ndị na-akwado ya.
Image Copyright @realRochas @realRochas
O kwukwara ka ndị odeakwụkwọ mịnịstrị niile nọ na steeti ahụ zitere ya ebe kọntratị niile e kerela na steeti ahụ kwụ akwụ ugbua, ma gbagodu 'brake' n'ọrụ ọbụla a na-arụ.
Anyị achọghị 'Eco'
Ndị mba ECOWAS na-asụ bekee ajụla atụmatụ ịhọrọ otu akwụkwọ ego a kpọrọ 'Eco' maka nzụkọrịta ahịa na mpaghara ahụ.
Ndị DSS akpaala ike
Image copyright Ola Onemola
Nkenke aha onyonyo Ndị DSS
Ndị ọrụ nchekwa DSS azọpụtala ndị ọrụ enyemaka mmadụ ise bụ ndị otu a kpọrọ Islamic State of West African Province ISWAP tọrọ kamgbe afọ gara aga.
Mmadụ ise ndị azọpụtara gụnyere Jennifer Samuel Ukumbong, Adabe Cletus, Adamu Auwal, Arthur Ibojekwe China na George Danbaba Michael.
Anyi kwadoro Amotekun - Nnamdi Kanu
Nkenke aha onyonyo Abaribe, El-shalom na Tochukwu Uchendụ gbaara Nnamdi Kanu akaebe mgbe eji ya eji
Nnamdi Kanu bụ onye ndu Ipob ekwuola na ndi otu ya ga-enye atụmatụ Amotekun nkwado pụrụiche.
Na mkparịta ụka omere n'akara Facebook Radio Biafra ụnyaahụ, Kanu sị na Amotekun dịka ngalaba Biafra Secret Service otu Ipob wepụtara bụ nke ọ sị ndị gọvanọ ọwụwanyanwụ kwaturu.
Otu onye anwụọla ebe ọtụtụ ndị merụrụ mgbe ọgbaghara dapụtara n'etiti ndị na-eme ngagharịiwe na ndị uweojii na mpaghara Kasarani dị na Kenya.
Ndị a malitere ime ngagharịiwe kamgbe abalị anọ n'ihi ọnọdụ ọjọọ nke okporoụzọ dị n'ebe ahụ.
Marcus Rashford na-agbara Machester United bọọlụ nwereike ọ gaghị eso gbaa asọmpị ha ndị Liverpool n'ụbọchị Sọnde n'ihi mmeru ahụ.
Onye nchịkọta ha bụ Ole Gunnar Solskjaer sị na ọ bụ mkpebi ya itinye Rashford n'asọmpi ha ụnyaahụ kpatara nke a.
Ọkụ gbara ụlọobibi ụmụakwụkwọ na Mahadum Michael Okpara
Image copyright Obinna Chineke
Ọkụ gbara IBB Hostel dị na Michael Okpara University Of Agriculture dị n' Umudike Abia Steeti ụbọchị Wenezde.
O nweghị onye nwụrụ na ya bụ ọkụ gbara mana ndị nọ ebe ihe mere kwuru n'ọkụ ahụ gbara akwa na ụfọdụ ihe ha jiri biri.
Ụfọdụ rụtụrụ aka na ọ bụ nsogbu si na ngwa ọkụ latrik nwere ike ibute ọkụ ọgbụgba ahụ.
Otu nwata akwụkwọ ụklọakwụkwọ ahụ bụ Chukwuemeka Ndubisi kwuru na ọ bụ Ụmụakwụkwọ n'dị nche mahadum ahụ gbakọtara aka menyụọ ya bụ ọkụ.
Nke abụghị mbụ ọkụ na-agba na ya bụ mahadum, ọkụ gbara gbara n' ụlọbibi ndị PG mahadum ahụ n'afọ 2015.
Mba isii ajụla nkwekọrịta Ecowas inwe otu ego
Naijiria na mba ise ndị ọzọ so na mba isii na-asụ bekee nọ n'otu Ecowas akatọla nkwekọrịta ndị mba asatọ ndị ọzọ ndị na-asụ Frnshị maka iji otu ego azụ ahịa n'Ecowas.
Ihe Trump mere doro ya anya - Parnas
Nkenke aha onyonyo Foto a gosiri Lev Parnas bụ onye ojiego achụ ego si mba Ukren na Amerịka bụ enyi ọkaiwu Onyeisiala Trump
Lev Parnas bụ otu onye na-arụrụ Rudy Giuliani bụ ọkaiwu Onyeisiala mba Amerịka bụ Donald Trump, ekwuola na ihe ọ mere so n'ihe e ji enyocha ya n'ụlọomeiwu ukwu ugbua, doro ya anya nke ọma.
Parnas kwuru na ihe Trump na Giuliani nọ na-eme gbasara ndị mba Ukren inyocha Joe Biden bụbụ osote onyeisiala mba Amerịka, na nwa ya nwoke abụghị inyocha mpụ, na ọ bụ imetọ aha onye ya na Trump na-azọ ọkwa.
Nke a na-eme ka ndi omeiwu nta n'Amerịka họpụtara mmadụ iri na abụọ ga-agara ha ikpe ichutu Trump N'ọrụ n'ụlọ omeiwu ukwu.
Joshua na Pulev
Nkenke aha onyonyo Anthony Joshua na Joseph Parker
Oti ọkpọ mba Bulgaria bụ Kubrat Pulev na-ekwu na ekpebiela ọgụ ya na Anthony Joshua ka ọ bụrụ n'ọnwa May afọ a.
Pulev na-ama Joshua aka iji mara onye bụ ọkaibe na ogoogo IBF, mana Joshua ekwubeghi ihe ọbụla maka ọgụ a.
Otu mkpụrụ goolu Juan Mata nyere n'old Trafford, nyere Manchester United mmeri ha ji wee wụbanye n'agba nke anọ n'asọmpi n'Iko FA.
Image Copyright @ManUtd @ManUtd
Ihe nkiri a gbasara ihe ụmụnwaanyị gabigara oge agha Biafra, ga-amasị gị:
Media captionEtu ụmụnwaanyị Biafra si husie anya n'oge agha
Ịrụ ọrụ mesịn na-amasị m - Nwaanyị na-edo ụlọ
Okada, Buka, K-Leg so n'okwu Bekee Nigeria banyere na 'Oxford Dictionary' n'afọ 2020
Tupu ị gaa China lekwa ihe ị kwesịrị ịma maka ọrịa coronavirus